UK oo Iiraan ka dalbatay si degdeg ah inay usoo dayso markabka iyo shaqaalaha – Radio Daljir
Luulyo 23, 2019 6:43 b 0
Dowladda UK ayaa ugu baaqday Iiraan inay siidayso markabka saliidda ee ku gooshayay calanka dalkaasi iyo shaqaalaha la socda, waxaana ay ku tilmaantay qabashadii Iiraanyiinta ee markabka inay ahayd mid sharci darro ah.
Ciidamada kacaanka Iiraan oo adeegsanaya diyaaradaha kumaantiga ukaca ayaa gacanta kusoo dhigay markab saliid oo gooshayay gacanga Hormuz maalinmadii Jimcadii, taasi oo u muuqatay mid loogu aargudayo markabka Ingiriiska ee Iiraan ay horay qabsatay.
“Markabka waxa lagu qabtay waa been abuur iyo sharci darro, Iiraaniyiintu waa inay si degdeg ah usiidaayaan markabka iyo shaqaalaha saaran” ayuu yiri afhayeen u hadlay raysal wasaaraha Ingiriiska Thresa May.
“Ma doonayno wax iska horimaad ah oo na dhexmara inaga iyo Iiraan, balse waa mid aaan la aqbali karin in markab ganacsi oo sharciysan laga soo qabtay biyaha caalamiga ee maraakiibta” ayuu ku daray.
May, ayaa shir guddoomisay kulan ay yeesheen ciidamada Ingiriiska ee loo yaqaan Copr, kaasi oo looga hadlayay jawaabta UK ee xiisadda gacanka
Ciidamada Iiraan ayaa maalinimadii Axaddii soo bandhigay muuqaal iyagoo qabanaya markabka saliidda ee ku gooshaya calanka Britishka.
Dowladda Britain ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo talaabooyinkeeda xiga maalinimada Isniinta ee soo socota.
Mudanayaasha labada Aqal ee Barlamaanka Somaaliya oo Muqdisho kulan ku yeeshay